Yoga Isitolo esidayisa yonke impahla Long Sleeves Isigamu Zip Sweatshirt Running Umkhiqizi kanye Umthengisi | Westfox
Uhlobo Supply: OEM & ODM
Inombolo imodeli: WF-YS0039
Ukwakheka Indwangu: 90% Polyester 10% Spandex
Sample isikhathi: 7 days
1. I 1/2 ye-zip pullover nge elula ukusebenza kakhulu ukunyakaza sithuthukiswe nenduduzo. Bewumsebenzi ngokucophelela kwenza le-yoga ihembe izinga okusezingeni eliphezulu, ezikhangayo futhi iqine. High Intamo Collar kuyokugcina kulungele ngikwenze ubukeka asebenzayo. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi ukudonsa phansi uziphu, ukuthi kungaba Okuxekethile entanyeni collar ezivuma uphumule.
2. Lokhu jacket umjuluko-wicking izici ekwakheni Esilula, Flatlock imikhono Raglan bese uthinta esithambile. Thumb Izimbobo kusiza ukugcina imikhono yakho endaweni, akukho ukuguquguquka futhi ukubhakuzisa kulowo moya.
3. Lokhu ukwenzela ukungena okuncane kakhulu kufanelekile nokunwebeka ukugijima jacket uphelele uma udinga nje ukufudumala kancane. Indwangu ultra-soft kuyinto zikanokusho ngokumelene isikhumba, nakanjani thanda bazizwa ke. Fast-ezomile wicking Indwangu kusiza shabalala umswakama.
Fabric Type 90% Polyester 10 %Spandex
Yoga Sweatshirt Usayizi Ishadi
T o ufunde kabanzi mayelana izitayela efanayo.
C ontact nathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana Inani, Packing, Ukuthumela Isaphulelo.
Previous: Full Zip Up Yoga Jacket with Thumb Holes Workout Running Track
Okulandelayo: Women Hoodie Sweatshirt Ultra Soft Fleece 1/4 Zip Up
half zip sweatshirt running
long sleeve half zip sweatshirt running
long sleeves half zip sweatshirt
yoga long sleeves half zip sweatshirt
Girls Sports Bra With U Shape Spaghetti Strap
Leggings Sports Sets Spaghetti Straps Removeabl...
Tank Tops With Built In Bra Women Sports Clothing
Leggings Workout Yoga Women Printed
Swiming Dress, Long Sleeve Swimwear, 100% Cotton Twill Cargo Shorts, Sweatshirt Abesifazane , Swim Shorts Trunks, Ibhayisikili nezingubo ,